Booliska Britain Oo Sheegay in Garoon diyaaradeed ay ka heleen Walxaha qarxa.
Wednesday March 06, 2019 - 10:20:02 in Wararka by
Wararka ka imaanaya wadanka Ingiriiska ayaa sheegay in muddo kooban albaabada loo laabay garoonka labaad ee dhanka diyaaradaha ugu weyn wadankaasi.
Shaqaalaha garoonka City Airport oo ku yaala koofurta magaalada London ayaa xalay seqdi dhexe amar lagu siiyey in ay si dhakhso ah garoonka ku faarujiyaan, kadib marki halkaas laga helay kartoomada ay kujiraan waxyaabaha qarxa, garoonkaas ayaana ahaa goobti 3aad ee maadooyinka lagu arko.
Ugu yaraan 100 Shaqaale oo garoonka ka howl galayay ayaa laga daad gureeyey goobta, maamulka guud ee garoonka City Airport ayaana lagu amray inay shaqada joojiyaan, halkaasna waxaa ka soconaya baaris ay sameynayan ciidanka Police-ka.
Waaxaha dabagalka ee dalka Ingiriiska ayaa ka dhawaajiyay in miinooyinka laga helay City airport iyo Boosteejada Waterloo aan la furin kooxaha miina baarka magalada London ayaa ku guuleystay in ay si dhibyar ukala furfuraan.
Muddo saacado ah ayaa hakad la galiyey dhaq dhaqaaqa labadan garoon iyo Boosteejada waterloo inkastoo saaka aroorti hore dib loo furay, boqolaal katirsan ciidanka police-ka ingiriiska ayaana lagu arkayaa garoomada iyo boosteejooyinka laga raaco tareenada, kuwaas oo baaris ku sameynaya dadka iyo agabka kasoo degaya goobahaasi.
Wasiirka gaadiidka dalka Ingiriiska ninka lagu magacabo Kiris Gereling ayaa shacabka ugu baaqay in ay waaxaha amaanka kusoo war geliyaan wax kasta oo ay ka shakiyaan, ayna kaga fogaadaan goobta ay wax ku arkeen.
Duqa Magalada London Sadiq Khan ayaa isna u mahad celiyey ciidanka Police-ka Kuwa sirdoonka iyo shaqaalaha ka shaqeeyo wasaaradda gaadiidka, wuxuuna ku ammaanay sida ay dadaalka ugu bixiyeen, ilaalinta amniga magaalada London oo ah caasimada dalka Ingiriiska.
Sanadadii lasoo dhaafay ayuu dalka ingiriiska marti galinayay weeraro kaligii duulnimo ah oo ay fulinayeen dhalinyaro muslimin ah, kuwaas oo adeegsanayay tooreeyo, qaraxyo, gaadiid jiirsiin iyo Dariiqooyin kale balse mana cada in falka xalay dhacay uu xiriir la leeyahay weerarada aan soo sheegnay, inkastoo Police-ka wadankaas ay shaaciyeen in falkan uu ahaa mid argagixiso oo isku xiran.
Sarkaal katirsanaa Howlwadeennada Garoonka Muqdisho oo Hodon lagu dilay.